トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Features - ukubona indlela Horukon nini eliphakathi
E Horukon capture, kuye ukuba abe nako ukuseta ibhola kunye Horukon. Phakathi kwabo, ufakelo phezulu, isicwangciso esiphakathi, kukuba ephantsi iseti kunye neendidi ezintathu abakhoyo. Ngo, kwiseti embindini, singathanda ukuba into eza kukhangela okuya kwenzeka. iseti esiPhakathi of
Horukon iye yaba yeyona kunzima ukubona ngayo iifayile 3 izicwangciso.
Njengoko isizathu, izinto ezinjalo kuba kubonakala intshukumo efana iseti omkhulu ngelo xesha. Umzekelo, kwi-high-amisiweyo, kodwa ukuba kukho ukuqonda kokuba ibhola ukumvumela kwasekuqaleni, ukuze izinto ezifana efanayo nabo phakathi xa kusenzeka esisicelo. Kwakhona
, ngezimanga ukuba kube nzima ukunciphisa ibhola yetreyi eliphezulu, nayo iye yaba kunye nabo kwenzeka kwiseti nesenzeko eliphakathi libonakala esitalatweni nge. Into oko kukuthi, umahluko phakathi sentlalo ephakamileyo kunye isicwangciso esiphakathi, ufika kwinto ukuba zinkulu kakhulu.
kunjalo, sithanda kukho kwakhona indawo eyahlukileyo apho ekubekeni eziphakamileyo beziko eliphakathi.
oko, Kubonakala ngathi into yokuba inani givin jackpot eyahlukileyo. Kwimeko isicwangciso phezulu, ngaphakathi kwiqela, leyo wonyulwa ngo isigqibo kwiqela, kodwa ebesoloko hit enkulu kwenzeka omnye emva komnye, kwimeko beziko eliphakathi, nabo kwiqela yokuwina, ukususela ezine ngaphakathi kumaqela amahlanu, malunga enye kuphela ngezinto kwenzeka ukuba jackpot akukho ivaliwe.
kule mbono, phakathi kwabo ukuqinisekisa Horukon capture, ngenxa yokuba kwakukho abo uluvo yahlukile, andazi ukuba icace loo nto. Ekubeni isibakala sokuba abanye abantu ngolo hlobo uluvo, zama ireferensi njengomnye uluvo.
la ziya kuba ifitsha enokuthi yenzeke ekubekeni embindini.
into enjalo, ngokuhlasela ejolise etafileni ukuba kwenzeka rhoqo, nkqu iseti embindini sele kuthiwa kunokwenzeka ukuba bazobe hit enkulu kwangaphambili.
Noko ke, ngokuba lokufakwa usebenzisa Horukon, banezimvo ezahlukileyo phakathi kwabo ukuqinisekisa oku Kuyinyaniso kananjalo akukho isoloko kwakhona ityala elo. Ekubeni kwakhona encinane okubhaliweyo malunga iseti phakathi xa
net, njl, sigcine ebhekiselele ekutshoneni eliphezulu kwaye isenzeko into efanayo, bekuya kuba kwinto yokuba ngumbono olungileyo ukujonga inani okanye ezifana le jackpot Ndicinga.